Dr. Patrick Young, Munyori weSteroid Raws
Dr. Patrick Young akanyora garari .
1. Synephrine HCL Overview Nhasi, yakakwira chikamu chevanhu vari kutsvaga sarudzo dzekuchengetedza huremu hune hutano. Zvakanaka, pakati pavo vese, kushandiswa kweSynephrine HCL puru ndiyo imwe yenzira dzakachengeteka dzaungachengeta asina hutano mafuta kune bay. Synephrine poda ndeye alkaloid kemikari yemakemikari iyo isingawanzo kuwanikwa. […]
1. Chii chinonzi Pyridoxal Hydrochloride? Pyridoxal Hydrochloride kana vhitamini B6 ivhithamini yakanyungudutswa nemvura inowanzo kuwanikwa muzvikafu. Iyo inonyanya kushandiswa sechinhu chinowedzera chekudya. Kana ichishandiswa sechinhu chinowedzera, Pyridoxal Hydrochloride inogona kurapa kana kudzivirira matambudziko mazhinji ekurapa. Inowanzotorwa jekiseni, mumuromo kana mune zvekuwedzera zvekudya. Kana iwe uri muumbi, ichi vhitamini […]
Kusangana pabonde kunofungidzirwa kuti kwakajairika muvarume, uye kune rombo rakanaka kwavari; kune huwandu hwesarudzo dzekurapa kusarudza kubva kwavari vese kubva kuViagra, Cialis, uye ED zvinodhaka. Vanewo nemahara anorapwa kubatsira kudzoreredza yavo bonde drive. Vakadzi vanonzwa kusiiwa mune izvi. Neraki, ivo vane sarudzo zvakare. […]
Chii chinonzi Oxandrolone (Anavar)? Oxandrolone (53-39-4), ine Anavar poda sezita rayo rezita, is synthetic androgen uye anabolic steroid (AAS) zvinodhaka inozivikanwa kwazvo nekuda kwesimba rayo uye simba-inosimudza masimba. Iyo iri pakati peinonyanyozivikanwa uye inoshandiswa pamuromo anabolic steroid. Anabolic zvinoreva kuti inowedzera mapuroteni esero, zvichitungamira […]
1.IYO chii SR9009? SR9009 kana stenabolic ndeye CAS 1379686-29-9 supplement inotevedzera mhedzisiro yem Cardio mazoezi. Kwete chete kuti mushonga uchakubatsira kudzora mamwe mafuta akawandisa emuviri, asi zvichawedzera simba rako paunenge uchiwedzera kutsungirira. SR9009 is synthetic synthet, yakavapo kuburikidza […]